Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: very hevitra, mety ho very fanahy | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: very hevitra, mety ho very fanahy
Efa tsy manaitra mankaiza intsony ny vaovao mitatitra fitsaram-bahoaka miafara amin’ny vono olona, olona izay tratra ambody omby na voahendrikendrika noho ny ahiahy mivesatra aminy momba ny heloka iampangana azy. Ny fisesisesin’ny tranga toy izany manerana ny Nosy dia manambara ny fironan’ny mponina any amin’ny fiheverany fa hany fanavotana ny tenany sy ny fiarahamonina dia ny fiarovany mivantana ny tenany. Ritra ny fahatokisana an’izany fisian’ny mpiahy ny olona sy ny fananana izany.
Ny fahitana ny firongatry ny herisetra tsy misy fetra noho ny tsy fahombiazan’ny fiarovana atao fanoherana an’izany mitarika ny mponina hiaro tena sy hamaly faty ka hampitondra faisana an’ireo izay tratrany. Miitatra arakarak’izay ny fahatongavana any amin’ny fanaovana fitsarana amoron-dàlana ivelan’ny lalàna. Any amin’ny tany milamina, voalaza fa aleo mamotsotra olona meloka iray toy izay manameloka olona iray tsy manan-tsiny. Mifanipaka amin’ny fiheveran’ny mponina aty amin’ny tany tsy milamina izany. Maro hoy izy ireto ny mpanao ratsy tafaporitsaka tsy tratran’ny mpitandro filaminana ary amin’ireo vitsy voatana ka nalefa ho tsaraina noho ny antony samihafa iaraha-mahafantatra, mbola maro no afa-maina. Kely finoana noho izany ny vahoaka.
Sady varavarana mivoha ho an’ny tsy rariny ny fitsarana maimaika an-dàlambe no mety hitera-doza eo amin’ny fiarahamonina. Loza tokoa eo amin’ny tantaram-pirenena ny fifandrifian’ny seho roa samy hafa manodidina ny fironanan’ny olona any amin’ny fanaovana fitsaram-bahoaka. Ny tranga iray moa dia ny vono nahafaty nihatra tamin’ny mpitandro filaminana telo lahy eo am-panatanterahana iraka izay nafangaron’ny mponina tamin’ny mpanao ratsy, tany amin’ny toerana iray hafa kosa ny mpitandro filaminana no nitifitra ka nahafaty olona izay nandray anjara tamin’ny hetsika nanao fitakiana olon-dratsy efa tany ambany fiarovan’ny mpitandro filaminana.
Samy fahafatesana ao anatin’ny tsy rariny no niseho tamin’izany tranga roa samy hafa izany. Nefa very hevitra ny olona. Raha izany no mitohy ho very fanahy ny fiarahamonina. Lasa fanjakan’i Baroa izany hoe toy ny biby ny didin’ny mahery no manjakazaka. Fotoana fanararaotra izao fifidianana izao hametrahana hafatra amin’ireo mpilatsaka. Ny fampiharana ny làlana hifehy ny olon-drehetra tsy ankanavaka na filoha izany na mpangataka no asany, no hany antoka anjakan’ny rariny. Izay sahy hampiatra izany ka hijoro ao anatin’ny hajan’ny fifehezan’ny lalàna azy no hisalotra ny lamba mitafy ny mpitondra.